Uyifumana njani i-WhatsApp kwi-PC ngaphandle kokuskena ikhowudi? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifumana njani i-WhatsApp kwi-pc ngaphandle kokuskena ikhowudi?
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 299
Abo bahlala besebenza kwikhompyuter, iyacaphukisa kwaye kwangaxeshanye yinkcitho yexesha ukusebenzisa iselfowuni ukujonga okanye ukuphendula imiyalezo efunyenwe kuWhatsApp.
Kuxhomekeka kwindlela osebenza ngayo okanye osebenza ngayo, usebenzisa ikhompyuter kwaye ngaxeshanye iselfowuni ayibeki ngxaki. Nangona kunjalo, kukho abo, nokuba bangazama kangakanani, abanakho ukwandisa ixesha labo kunye nomsebenzi.
Esi sesinye sezizathu zokuba siza kukubonisa ukuba ungaba njani noWhatsApp kwikhompyuter yakho ngaphandle kwesidingo sokuskena ikhowudi yeQR. Ngaphambi kokuqala inkcazo, kufuneka sikuxelele ukuba kubalulekile ukuba unekhompyuter elungileyo enokuxhasa i-emulator ye-Android.
Ungayifumana njani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho ngaphandle kokuskena enye ikhowudi?
Kuqala kufuneka siphawule ukuba kukho amathuba amabini xa kufikwa ekubeni ne-WhatsApp kwikhompyuter yethu. Eyokuqala kukusebenzisa uguqulelo lwewebhu oluhambelana phantse nasiphi na isikhangeli.
Enye kukuya Iphepha laseburhulumenteni le-WhatsApp kwaye ujonge uhlobo lwesi sicelo seekhompyuter ngokwendlela yokusebenza oyifakileyo. Kwakhona unokukhetha ukuba ukhuphele u-32-bit okanye u-64-bit uguqulelo lwewhatsap kwidesktop.
Kodwa ngaphandle koku, ezi zicelo zimbini ziya kukucela ukuba usebenzise ifowuni yakho ukuskena ikhowudi ye-QR. Ngoku, njengoko isidingo sakho kukusebenzisa esi sicelo kwikhompyuter yakho okanye kwiilaptop ngaphandle kokwenza oko kuskena, unayo enye indlela Sebenzisa i-Android emulators.
Inokukunceda njani i-emulator ye-Android?
Ukuba wenza uphando kwi-intanethi, uya kufumanisa ukuba kukho iintlobo ngeentlobo zeemulators ze-Android. Kodwa gcinani engqondweni ukuba aninakukhuphela kuphela ii-emulators kweli qonga, kodwa ninokukwenza ngokuzama linganisa imeko ye-IOS.
Kodwa ukuyidlala ikhuselekile kwaye inokwenzeka, eyona nto unokuyenza yile khuphela i-Bluestacks emulator. Le yeyona nkqubo idumileyo neyasetyenziswa ngokubanzi yokulinganisa indawo ye-Android emhlabeni.
Iinkcukacha kukuba, ukuze ukwazi ukusebenzisa le nkqubo, kuya kufuneka unekhompyuter elungileyo enezinto ezifanelekileyo zekhompyutha. Ke ngoko, ukuba unekhompyuter eneegigabytes ezimbini kuphela zenkunzi yegusha kunye nendawo encinci yokugcina, i-emulator iya kuba nexesha elinzima lokubaleka.
Sebenzisa i-emulator ukusebenzisa i-whatsapp
Ingcebiso yethu kukuba ukhuphele i-emulator ethile. Nangona kunjalo, ungasebenzisa nayiphi na i-emulator oyifunayo kwikhompyuter yakho. Ekugqibeleni, inkqubo eya kuba nakho sebenzisa i-whatsapp ngaphandle kokwenza nantoni na iyafana ncam.
Oko kukuthi, okokuqala kufuneka ube nenkqubo efakwe kwikhompyuter yakho, emva koko kuya kufuneka uyiqhube kwaye nje ukuba imeko ye-Android ivule, unokukhetha ezimbini:
Fumana usetyenziso lwe-whatsapp kwiVenkile yokudlala kaGoogle
Okanye ukhuphele usetyenziso kwifomathi ye-APK emva koko ulayishe ifayile kwi-emulator ukuze iqale inkqubo yokufaka.
1 Ungayifumana njani i-WhatsApp kwikhompyuter yakho ngaphandle kokuskena enye ikhowudi?
1.1 Inokukunceda njani i-emulator ye-Android?
1.2 Sebenzisa i-emulator ukusebenzisa i-whatsapp
Indlela yokufumana ukuthanda kwiTikTok?
Uyisebenzisa njani iTikTok?